प्रस्तावित राजदूत खतिवडासहित तीन राजदूतवि’रुद्ध उजुरी आह्वान
काठमाडौँ : संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिले युवराज खतिवडासहित तीन जना प्रस्तावित राजदूतवि’रुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ । समितिले अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरू युवराज खतिवडा, लोकदर्शन रेग्मी र निर्मलकुमार विश्वकर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो ।
समितिको बुधबारको बैठकले बिहीबारबाट लागू हुनेगरी सरकारद्वारा प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्दै समितिले १० दिनको म्याद दिएर उजुरी आह्वान गरेको हो ।
सरकारले असोज १६ गते पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिका, निवर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायत र डा. निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।
उनीहरुको राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाई समितिबाट नाम अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कात्तिक ३ गतेसम्म उजुरी दिन सकिने समिति सचिवालयले जनाएको छ ।
सूचनामा सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने लागेमा स्पष्ट आाधार एवं सबुद प्रमाणसहित उजुरी दिन भनिएको छ । उजुरीकर्ताको परिचय गोप्य राखिने पनि समितिले जनाएको छ ।